Taksiborosy Sprinter nivarina tao ambany tetezana: ankoatra zazakely iray mpandeha ampolony maty tsy tra-drano | NewsMada
Par Taratra sur 12/10/2021
Tao Antsahasoa, 10 Km atsimon’Ankaramena, Ambalavao, amin’iny RN 7 iny no nitrangan’ity lozam-pifamoivoizana nahatsiravina, omaly maraina ity. Nivarina avy eny ambony tetezana ny taksiborosy Sprinter iray mampitohy an’Ihosy amin’i Fianarantsoa. Mpandeha am-polony no indray namoy ny ainy teo no ho eo vokatr’izany.
Manao sesilany ny lozam-pifamoivoizana. Taksiborosy Sprinter iray, avy any Fianarantsoa hihazo an’Ihosy ity tra-doza teo amin’ny tetezan’Antsahasoa, fokontany Malazarivo, kaominina ambanivohitr’Ankaramena, distrikan’Ihosy, omaly maraina, tokony ho tamin’ny 07 ora ity. Nivarina avy eny ambony tetezaka ilay taksiborosy ka nidaraboka tery ambany ka potika tanteraka. Araka ny tatitra voaray, ankoatra ireo mpandeha 15 naratra mafy, am-polony no namoy ny ainy teo no ho eo. Anisan’izany ny zazavavikely iray vao 12 taona monja, teny am-pofoin-dreniny, izay fantatra fa namoy ny ainy ihany koa
Hatramin’ny ora nanoratanay farany, tafakatra 12 ireo maty ary olona 13 isa mbola mitsabo tena. Hatreto, mbola ao anatin’ny fanadihadiana ny mety nahatonga ny loza ny zandarimaria ao an-toerana. Manao antso avo amin’ireo fianakavian’ireo niharam-boina ihany koa ny fokonolona mba hijery ireo havany tra-doza. “Mbola aty Ambalavao ny vata-mangatsiakan’ireo maty hanarahana ireo dingana tokony hatao mahakasika izany raha efa nalefa any amin’ny CSB II Ankaramena, hopitalin’Ambalavao sy Fianarantsoa ireo naratra mafy.”, hoy ny fanazavan’ny zandary. Naratra mafy tamin’ity loza ity koa ny mpamily ny fiara, izay mbola manohy ny fitsaboana ka tsy azo anaovana fanadihadiana.
“Fiarana zandary ary tsy manana licence ity tra-doza”, hoy kosa ny loharanom-baovao iray hafa. Mipetraka, araka izany, ny fanontaniana hoe tsy nisy ve izany ny fisavana ny fiara teny an-dalana nahatrarana io taksiborosy io?
Mbola teny amin’ny RN7 ihany
Niteraka resabe ireo lozam-pifamoivoizana misessesy efa ho isan’andro. Tsy vitsy ireo nilaza fa ny mpamily mihitsy no fototra mahatonga izany. Ao ireo nanazava fa tsy mbola mahafehy tsara ny fifamoivoizana ny mpamily kanefa dia misetrasetra tokoa rehefa mitondra fiara. Ao koa ireo mpandeha izay mampirisika ny mpamily handeha mafy tokoa noho ny fahamaizany. Ankoatra izay, maro koa ireo naneho hevitra fa tsy mety amin’ny lalana eto amintsika irony fiara Sprinter irony noho ireo mpamily mitsapa ny tanjaky ny fiara rehefa eny amin’ny lalam-pirenena samihafa…
Tsiahivina fa vao tsy ela akory izay ilay lozam-pifamoivoizana namoizan’ain’olona maro hatramin’ny zazamenavava teny Anteza, tamin’iny lalam-pirenena fahafito iny ihany. Taorian’ny tranga, nisy ny fampiofanana ny mpamily hisorohana ny tranga toy ireny. Nisy koa ny fepetra napetrak’ireo tomponandraikitra samihafa mandrindra ny lalan’ny fifamoivoizana kanefa izao miverina izao indray. Tokony hisy ve izany ny andraikitry ny ministera hijery manokana ny resaka fifamoivoizana, ny fiara ary indrindra ireo mpamily, izay mampitaraina ny maro tokoa.